यस्ता छन् मह र लसुन मिसाएर खानुका चमत्कारीक फाइदै फाइदा - ज्ञानविज्ञान
लसुन र मह (हनी)को बारेमा जानकारी नहुने सायदै होलान्। हरेक दिन हाम्रो भान्सामा लसुन मसलाका रूपमा प्रयोग हुन्छ। लसुन मसलामात्रै नभएर यो भान्साको औषधि पनि हो। यसले शरीरका अनेक विकारलाई शुद्धीकरण गरेर अनेक खाले इन्फेक्सन कम गर्नसमेत सहयोग गरिरहेको हुन्छ। लसुनले मानिसको पाचनक्रियालाई समेत फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ।
दुई, तीनवटा लसुनको पोटी पिसेर पेस्ट बनाउने। त्यसमा ताजा (काँचो) मह मिसाउने। मि श्रणलाई केही बेर राख्ने, यसो गर्दा लसुनमा मह राम्ररी मिसिन्छ। यसरी बनाइएको पेस्ट बिहान खाली पेटमा ७ दिनसम्म सेवन गर्ने।
लसुनजस्तै मह पनि मानिसका लागि औषधीय गुणले भरिपूर्ण छ। लगातार सात दिनसम्म मह र लसुन सेवन गरेमा स्वास्थ्यका लागि चामत्कारिक फाइदा गर्छ। मह र लसुनबाट बनाइएको ‘पेस्ट’ सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा लाभ मिल्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव छ।
लसुन र महको मि श्रण सेवन गर्दा शरीरमा गर्मी बढाउँछ । यसले तपाईंलाई रुघाखोकीबाट जोगाउँछ।
लसुन र महको पेस्ट सेवन गर्दा मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुग्छ । यसले मुटुमा जमेर बसेको विकारलाई बाहिर निकाल्छ। यसले मुटुका धमनी सफा गर्ने हुँदा रक्तसञ्चार राम्रोसँग हुन पाउँछ।
यसको सेवनले पाचनक्रियालाई बलियो बनाउँछ। मानिसको पाचनप्रणाली सबल भयो भने पेटका कारण सुरु हुने अन्य बिरामी लाग्नबाट जोगाउँछ।
लसुन र महको पेस्टले शरीरमा जम्मा भएको फोहोर र विकार बाहिर निकाल्न ‘क्लिनर’को काम गर्छ। शरीरको विकार बाहिर निस्किएपछि मानिसलाई स्वस्थ जीवन बिताउन यो लाभकारी मानिएको छ।
यति तपाईं पटकपटक लाग्ने झाडापखालाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने लसुन र महको पेस्ट तपाईंका लागि ‘अमृत’ हुनसक्छ। यसको सेवनले पाचनप्रणालीले राम्ररी काम गर्न थाल्छ। यसले तपाईको पेटसम्बन्धी जुनसुकै प्रकारको संक्रमण निको हुनसक्छ।
लसुन र महको पेस्ट घाँटीको इन्फेक्सनमा पनि त्यत्तिकै लाभकारी मानिएको छ। यसको मि श्रणमा एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुण पाइन्छ, जसले घाँटीको खसखस र सुन्निएको अवस्थाबाट आराम दिलाउँछ।
लसुन खानुका पाँच फाइदा र बेफाइदा यस्ता
लसुन हाम्रो किचनमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ । विशेषरुपमा यसको प्रयोग खानाको स्वाद बढाउन गरिन्छ । यसले तपाईंलाई विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान गर्छ जस्तै रक्तचापलाई कम गर्नु, कोलेस्ट्रोलको स्तरलाई घटाउनु, कार्डियोभास्कुलर स्वास्थ्यमा सुधार गर्नु र क्यान्सरलाई रोक्न सहयोग गर्नु ।
लसुनलाई औषधीको रुपमा समेत प्रयोग गरिन्छ । यसका विभिन्न फाइदा भएपनि योसँगै बेफाइदा पनि जोडिएका छन् । आज हामी तपाईंलाई लसुन खाने र नखाने कारणबारे जानकारी दिँदै छौं ।
लसुन खानुका पाँच ठूला फाइदाः
१. प्रतिरोधी क्षमतालाई चुस्त राख्छः
लसुनमा प्रोटिन हुन्छ जसले विभिन्न स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्ने एन्टीबडी बनाउन सहयोग गर्दछ । यसलाई रुघा–खोकी र यहाँसम्म कि अत्यधिक गम्भीर रोग लाग्ने जोखिम पनि कम गर्ने गर्दछ ।
यसका साथै, जो व्यक्तिको रगत गाढा हुन्छ, उनीहरुका लागि पनि लसुन निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसले शरिरमा रक्त प्रवाहलाई सहज बनाउने काम गर्छ । यसले रगतलाई पातलो बनाउँछ जसले तपाईं सम्भावित रोगबाट बचाउने गर्दछ ।
२. हृदय रोगबाट बचाउँछः
लसुनले तपाईंको शरिरमा ब्याड कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गर्दछ । यसकारण तपाईंको मुटु सधैं स्वस्थ रहन्छ । यसले शरिरमा गुड कोलेस्ट्रोल बढाउन सहयोग गर्दछ । उच्च रक्तचापलाई कम गर्न पनि लसुन निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा पाइने एलिसिन नामक तत्वले उच्च रक्तचापलाई सामान्य गर्न सहयोग गर्छ ।
३. क्यान्सरलाई नष्ट गर्छः
लसुनको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई विकास गर्दछ । केही जानकारका अनुसार लसुनमा क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोगसँग लड्ने क्षमता पनि हुन्छ । प्यानक्रियाज, कोलोक्टोरोल, स्तन, प्रोस्टेट क्यान्सरका रोगीलाई काँचो लसुनको सेवन गर्न डाक्टरले सल्लाह दिन्छन् ।
४. दाँत दुखाईमा राहतः
लसुनले दाँत दुखाईमा पनि राहत दिलाउने काम गर्दछ । लसुनलाई ल्वाङ्गसँग पिसेर दाँत दुखेको ठाउँमा लगाउँदा पीडाबाट तुरुन्त राहत प्रदान गर्छ ।
५. गर्भावस्थामा पनि फाइदाजनकः
गर्भावस्थामा लसुनको नियमित सेवनले आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पुर्याउँछ । यसले गर्भभित्र शिशुको तौल बढाउन पनि सहयोग गर्दछ । गर्भवती महिलालाई यदि उच्च रक्तचाप छ भने उनले ९ महिनासम्मै लसुनलाई कुनै न कुनै रुपमा सेवन गर्नैपर्छ ।
यसले रक्तचापलाई नियन्त्रण गरेर शिशुलाई हानी हुनबाट जोगाउँछ । यसले गर्भको शिशुको तौल बढाएर समय पूर्वको प्रसवको खतरालाई कम गर्छ ।
लसुन खानुका बेफाइदाः
१. तौल बढ्न सक्छः
यदि तपाईं आफ्नो खानामा लसुनको बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसको अर्थ तपाईंले आफ्नो शरिरमा थप क्यालोरी जोडिरहनु भएको छ । यसले तौल बढ्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।
२. लामो समयसम्म रगत बग्नुः
लसुनले तपाईंको रक्त नलीलाई फैलाउने काम गर्नसक्छ । अर्थात्, घाउ लाग्दा वा शल्यक्रिया गर्दा तपाईंको रगत अरुको भन्दा धेरै बग्छ। त्यसकारण घाउ ठिक नभएसम्म लसुन खानबाट बच्नुहोस् ।
३. सास गन्हाउँछः
लसुनलाई चमत्कारिक जडीबुटीको रुपमा मानिन्छ तर यसको अत्यधिक सेवन तपाईंको सासमा दुर्गन्ध फैलाउन सक्छ । यहाँसम्म कि यसको सानो टुक्राले पनि तेज गन्ध निम्त्याउन सक्छ ।
४. ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याकः
लसुनले ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याकमा जलन पैदा गर्नसक्छ । त्यसकारण यदि तपाईंलाई पाचन सम्बन्धि समस्या छ भने लसुनको प्रयोगमा सावधानी अपनाउनुहोस् ।
दिनहुँ एक चम्चा मह खानुका यस्ता छन् फाइदा
महले भोकलाई नियन्त्रणमा राख्ने भएकाले तौल घटाउन सहायता गर्छ। राति सुत्नुअघि मह सेवन गर्दा बढी क्यालोरी डढ्छ।महले छालाका लागि प्राकृतिक ‘मोइस्चराइजर’को काम गर्छ। यसले छालामा आर्द्रता कायम राख्छ र डण्डीफोर, दाग र छाला सुक्खा हुने समस्या हटाउँ ।
Don't Miss it कस्तो रोग हो एपेन्डिसाइटिस ? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षणहरु, जान्नुहाेस्
Up Next असफलताबाट उठेर कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ ? जान्नुहाेस्
दुधलाई कुन समयमा पिउदा फाइदा हुन्छ, यसलाई कसरी पिउने ?
मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य